राजपासँग मुकाबिला गर्न तयार छु – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अन्तर्वार्ता / राजपासँग मुकाबिला गर्न तयार छु
June 20, 2017 अन्तर्वार्ता Leaveacomment
उपेन्द्र यादव अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका एक नेता मनिष सुमनले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पैसा खाएर निर्वाचनमा भाग लिएको आरोप लगाएपछि यादवले त्यसको गतिलो जबाफ फर्काएका छन्। उनले जवाफ मात्र दिएका छैनन्, राजपालाई चुनौतीकै भाषामा आफूहरु मुकाबिला गर्नसमेत तयार रहेको बताएका छन्। मधेस आन्दोलनका नाममा राजपाले अरु कसैको हितमा काम गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, मधेस आन्दोलन, निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको भूमिका, संविधान संशोधनलगायत विषयमा केन्द्रित भएर संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी—
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले त तपाईंलाई सरकारसँग पैसा लिएर स्थानीय चुनावमा भाग लिएको भनेर आरोप लगाएको छ नि, सत्य हो ?
सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुलाई उनीहरुले नै लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने चुनौती दिन्छु । कहिले र कति रकम मैले सरकारसँग लिएको हुँ । त्यो कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ । होइन भने गलत कुराको प्रचार गर्दै हिंड्ने छुट कसैलाई पनि छैन । यदि उनीहरुले त्यो कुराको पुष्टि गर्न सक्दैनन् भने फटाहा नेताको आरोपको कुनै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक छैन ।
तर, राजपाकै एक जना नेताले त राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा खुलेरै तपाईंले पैसा खाएको र त्यो प्रमाण देखाउन सक्ने चुनौती नै दिएका छन् नि ?
मैले अघि पनि भनें, प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु । प्रमाणित गर्न नसक्ने हो भने जनतासँग माफी माग्नुपर्छ । दुवै गर्न नसक्ने हो भने उनीहरु बहुला हुन् ।
तपाईंले मधेस आन्दोलनलाई नै धोका दिएको भन्ने उनीहरुको आरोप छ । त्यो त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि ?
म सबैभन्दा पहिला राजपाको लडाइँ सरकारसँग हो कि संघीय समाजवादी फोरमसँग हो । त्यो क्लियर गर्न पनि सुझाव दिन्छु । राजपाको लडाइँ राज्यविरुद्ध र मधेसी जनताको हितमा हो भने उनीहरु त्यही रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । हामीसँग हो भने हाम्रो पार्टी क्रान्ति र संघर्षको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको पार्टी हो । कसैले गर्भाधान गराएको पार्टी होइन । लड्ने–भिड्ने हो भने पनि तयार छौं । मधेस आन्दोलनलाई मैले होइन उनीहरुले धोका दिएका हुन् । मधेसी जनता अहिले पनि निर्वाचन चाहिरहेका छन् । तर, उनीहरु अरु कसैका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलन मधेसी जनताका पक्षमा छैन ।
भनेपछि उनीहरु पनि कसैको पैसा खाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्, होइन त ?
शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला लुरुलुरु भोट हाल्न उनीहरु नै गएका होइनन् ? त्यतिबेला उनीहरु कसको पैसा खाएर गएका थिए ? राजपाका नेताहरुले देशको हितमा होइन अरुको हितमा काम गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरु मधेसी जनताका पक्षमा लडिरहेका छैनन् । मैले अघि पनि भनें, अरु कसैका लागि लडिरहेका छन् । मधेसी जनता त अहिले निर्वाचनका पक्षमा छन् । मधेसी जनता निर्वाचन चाहन्छन् । उनीहरु आन्दोलनका नाममा अरुअरु नै गरिरहेका छन् ।
कुनै बेला त तपाईं पनि मधेस आन्दोलनकै पक्षमा मात्र होइन संविधानकै विपक्षमा हुनहुन्थ्यो नि होइन, अहिले फेरि एकाएक निर्वाचनको पक्षमा देखिनुभयो । यसमा पनि केही होला नि ?
निर्वाचन मेरो चाहना होइन । निर्वाचन देश र जनताको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रलाई बचाइराख्न निर्वाचन आवश्यक छ । त्यसैले संघीय समाजवादी फोरम नेपाल देश, जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा भएकाले निर्वाचन चाहेको हो । निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर निर्वाचनकै पक्षमा उभिएको हो । मधेसी जनताका अधिकार राज्यसत्ताले खोस्यो भनेर हामीले भन्दै गर्दा ती अधिकार प्राप्तिका लागि निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन । हामी हिजो, आज मात्र होइन हाम्रा माग पूरा नहुन्जेल लडिरहन्छौं । हाम्रो अहिले पनि संविधान संशोधन पहिलो एजेण्डा हो ।
अहिले निर्वाचन र संविधान संशोधनलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने काम भएको छ । निर्वाचन र संविधान संशोधन फरक कुरा हुन् । हामी निर्वाचनमा सहभागी भयौं अब संविधान संशोधनको एजेण्डा नै सकियो भन्ने ती भ्रमपूर्ण कुरा हुन् । अहिले पनि हामीले संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान सबै नेपाली जनताका लागि सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छौं । संविधान संशोधन हाम्रो माग हुँदै हो । तर, त्यो माग पूरा नभई निर्वाचनमा जाँदैनौं भन्नु लोकतन्त्र, देश र जनताको विपक्षमा जानु हो । त्यसैले हामी निर्वाचनमा सहभागी भएका हौं । हामीले तुलनात्मक रुपमा मधेसका थारु, मुसहर, डोमलगायतका जाति बढी हेपिएका छन् । उनीहरुको पक्षमा, उनीहरुले पनि अनुभूति गर्ने खालको संविधान होस् भन्न खोजेका हौं । हामी मधेसी जनताको मात्र पार्टी होइनौं । हाम्रो राष्ट्रिय पार्टी हो । त्यसैले हामीले कर्णलाीका जनता, पहाडका जनता, आदिवासी, जनजाति, दलित, पीडित सबैले स्वीकार गर्ने संविधान होस् भनेर नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेका हौं । यो माग अहिले पनि छ । हिजो पनि थियो र पूरा नहुन्जेल यो माग हामी राखिरहन्छौं । तर, अहिलेचाहिं निर्वाचन पहिलो एजेण्डा भएको छ ।
राजपा निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा गइरहेका बेला तपाईंले निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । अनि उनीहरुलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो नि ?
रिस उठ्यो भन्दैमा घटिया आरोप लगाउँदै हिंड्न पाइन्छ ? मधेस अहिले उहाँहरुले आँकलन गरेजस्तो छैन । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु–अहिले तराईका जनताले निर्वाचन चाहेका छन् । त्यसैले उहाँहरु पनि तराईका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचनमा जानुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।
राजपाले भाग लिए पनि, नलिए पनि तपाईंहरु चाहिं निर्वाचनमा जाने नै हुनुभयो होइन ?
निर्वाचनमा जाने भनेर नै उम्मेदवारी मनोनयन गरेका हौं । उहाँहरुले पनि धेरै ठाउँमा मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ । अनि बहिष्कार भनेर हल्ला गरेर हुन्छ ? म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु– हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हो । देशभक्तहरुको पार्टी हो । हाम्रो उत्तरदायित्व नेपालभरिका जनतामा छ । हाम्रो पार्टी शोषण, उत्पीडनका पक्षमा लड्दै आएको पार्टी पनि हो । त्यसैले हामी हिजो, आज र भोलि पनि शोषणमा पारिएका उत्पीडित जनताका पक्षमा थियौं, छौं र रहिरहने छौं ।
कतिपय ठाउँमा त तपाईंले भारतबाट भारतीयहरु झिकाएर आन्दोलन भएको थियो भन्ने पनि आरोप लगाउनुभएको थियो नि ?
अहिले निर्वाचनको बेला हो । धेरै उत्तेजित कुरा नगरौं । सहमतिका कुरा गरौं, सहकार्यका कुरा गरौं । सहमति र सहकार्यलाई बिथोल्ने कुरा नगरौं । विगतमा के भएको थियो । कस्तो भएको थियो । त्यो बारेमा सञ्चार जगत पनि जानकार थियो । त्यसैले मैले धेरै भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
केही ठाउँमा तपाईंहरुले माओवादी लगायतका दलसँग पनि तालमेल गर्नुभएको छ । परिणाम त राम्रै आउला नि ?
हामीले पहिलो निर्वाचनमा भाग लिएका थियौं । सन्तोषजनक अवस्था नै छ । हाम्रो बलियो पकड भएका ठाउँमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैले हामी सन्तोषजनक अवस्थामा आउँछौं भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौं । कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुरा अब १४ गतेको निर्वाचनले पनि देखाउँछ । असोज २ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा पनि हामीले राम्रो परिणाम ल्याउने छौं ।
Previous सरी दार्जीलिङ
Next वकिलसँग कानुनका कुरा